Poetry / ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု by U Pe Maung Tin | PDF DOWNLOAD
ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု(ဦးေဖေမာင္တင္) / Poetry Collection by U Pe Maung Tin pdf download and read online. ayhkat hcam kab armarr hcu hcany mwu pdf download.
Here we collect some poems of popular author Pe Maung Tin, who wasaPali and Buddhist scholar and educator in Myanmar, formerly Burma. Born into an Anglican family in Pauktaw, Insein Township, Rangoon, he was the fifth child of U Pe and Daw Myaing. His grandfather was Henzada’s first Burmese shepherd, we collect some poems of this popular author, hope all Burmese people like those poems.
ဖေမောင်တင်သည်ယခင်ကမြန်မာပြည်တွင်ပါနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်နှင့်သင်ကြားသူဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ အင်္ဂလီကန်မိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူသည် ဦး ဖေနှင့်ဒေါ်မြိုင်တို့၏ပဉ္စမမြောက်သားဖြစ်သည်။ သူ့အဘိုးက Henzada ရဲ့ပထမဆုံးဗမာသိုးထိန်းပါ၊ ဒီနာမည်ကျော်စာရေးဆရာရဲ့ကဗျာအချို့ကိုငါတို့စုဆောင်းကြတယ်၊ ဒီကဗျာတွေကိုမြန်မာလူမျိုးအားလုံးကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Burames တွင်အချစ်ကိုဖတ်လိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ website သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
If you love to read love in Burmese, please visit our website We now share the book Burmese in regular Myanmar in PDF format on our site. Regularly visit our MyeBooksfree.com site to get the latest Burmese books for free download in PDF file format.
Burmese Books Download, Popular Burmese Poetry Download, Burmese Popular Poems Writers ebooks, New Myanmar Poetry Free ebook download.
Book Name: Poetry Collection / ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စုစည္းမွု
Book Author: U Pe Maung Tin (ဦးေဖေမာင္တင္)
Book Category: Burmese Books